Akụkọ - Kedu ihe mejupụtara ndị defoamers?
Ọdịmma mmepe nke ndị defoamers organic na ụlọ ọrụ akwụkwọ. Nnyocha ngwa nke ndị ọrụ nọ n'ụwa na-agbanwe site na otu ụdị ọtụtụ ihe gaa n'ụdị nke mejupụtara. Mba dị iche iche gburugburu ụwa ekenyela nnukwu ego nke njikwa akụ na ụba mmadụ na ego ndị ọkachamara nke ndị defoamers organic. Site na itinye ego na akụ, arụpụtala ọtụtụ nsonaazụ ọsụ ụzọ, arụpụtakwara arụmọrụ nrụpụta zuru oke nke ndị na -emegharị ihe. Ọkachamara nke nkwadebe ihe ọkụkụ na itinye ya n'ọrụ na -egosi usoro mmepe dị omimi. Dịka akụkụ dị mkpa nke ezinụlọ ihe ọkụkụ, ndị defoamers organic nwere otu usoro mmepe na ụlọ ọrụ akwụkwọ.
Dị ka anyị niile maara, na ụlọ ọrụ akwụkwọ na-arụ ọrụ nke ọma nke oleic acid amide, polyether, na ihe ndị dị ndụ na-anọchi anya ya, ndị defoamers na-anọchi anya ụdị mmanụ ala na-adịghị arụ ọrụ nke ọma, mmanụ ihe oriri, mmanya, wdg, wee nwee nnukwu onyinye. na ụlọ ọrụ akwụkwọ. N'ikwu okwu, a na -agbanwe polyether silicone defoamers site na ndị mbido dị iche iche. Enwere ike iji defoamers silicone dị ka ntọala maka ịkewa ndị na -emehie silicone polyether. Dị ka ọdịiche ha si dị, enwere ike ekewa ndị na -eme silicone polyether n'ime ụdị polyol na ụdị ester fatty acid, ya bụ, ụdị amine ether. Ụdị defoamers ndị a nwere njirimara nke ha.
Nhazi kemịkalụ nyocha dị iche na ndị nrụpụta ihe ndị ọzọ. Otu dị iche iche na-abụghị nke yiri nke anaghị arụ ọrụ nke ọma, ha enweghịkwa mkpakọrịta na ogige nwere mmiri, otu hydrocarbon ma ọ bụ otu na-arụsi ọrụ ike. E jiri ya tụnyere ihe ndị ọzọ na -emebi silicon organic, ọ nwere ike mebie ya. Ịdị uchu, n'ozuzu, ọ dị mkpa ka ịgbakwunye oke ntụpọ nke 1×10-6 ~ 75×10-6 jisiri ike na sistemụ ahụ iji nweta mmetụta a tụrụ anya ya nke mbibi dị elu.
Njirimara anụ ahụ bụ ihe na -agbanwe agbanwe na ogige izugbe, ọ dịghịkwa mfe ịnweta mmeghachi omume exothermic na ogige ụfụfụ. Ndị defoamers Organic nwere ezigbo nguzogide okpomọkụ na iguzogide ule dị elu na nke dị ala. Mkpokọta nke mmanụ silicone methyl ji nwayọọ nwayọọ na -abawanye n'ihe dị ka 200°C, na njikọ silicon-oxygen anaghị agbaze. Mmanụ silicone methyl nwere ezigbo mgbanwe na wettability. Ya mere, silicone defoamer bara uru iji melite ogo akwụkwọ mkpuchi.
Ndị defoamers Organic nwere nchekwa, nrụpụta akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, na agbatịkwuru ha. Nke a fashionable na nwere ọgụgụ isi n'ichepụta ogige. Organic defoamers nwere mgbochi ịka nká, usoro arụmọrụ yana mgbochi ịka nká. Enwere ike iji ha n'ụzọ zuru oke n'okpuru ụkpụrụ gburugburu ebe obibi niile. Organic defoamers nwere elu Nrụpụta niile nke ịdị mma, mana ọnụ ahịa ya dị elu. Enwere ike itinye ya n'ọrụ usoro mmepụta ọ bụla na ụlọ ọrụ akwụkwọ, yana arụmọrụ nrụpụta dị elu yana mgbe ụfọdụ mmetụta nkwụsị ụfụfụ na -adịghị eju afọ.
Ya mere, enwere ike jikọta ihe na -emebi ihe na ihe ndị ọzọ na -emegharị ahụ dị ka oleic acid amide na polyether na mwepụ na ịkpa oke nkpuchi iji mepụta defoamer mejupụtara, nke nwere ike ọ bụghị naanị meziwanye ikike iwepu ụfụfụ nke defoamer organic, kamakwa belata ọnụ ahịa nke ngwaahịa. Site na mmepe ọkachamara nke ihe ndị na -eme ka mmiri na -ere ọkụ, ndị na -emegharị ihe na -emepụta ihe nwere ikike ahịa ngwa ngwa yana nnukwu ahịa nwere.